Gini mere na anyi aghaghi igbasa ozi nkesa oru ozo | Martech Zone
Otu n'ime ndị ahịa anyị juru anyị anya taa, ha mere ka anyị mata na ha debanyere aha a Mwepụta Mgbasa Ozi Ọrụ nke otu n'ime ndị mmekọ ha tụrụ aro ebe ha nwere ike kesaa mgbasa ozi mgbasaozi ha na saịtị karịrị 500 dị iche iche. M ruru uju ozugbo… nke a bụ ihe kpatara ya:
Ọrụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi ebula ọkwa ọdịnaya ị na-akwalite ma ọlị, yabụ belụsọ na mmadụ na-ege ntị nke ọma maka mbipụta ụfọdụ ederede, a naghị ahụkarị ha na nsonaazụ ọchụchọ.
Ọrụ nkesa mgbasa ozi ejirila egwu, adịghị mkpa ụlọ ọrụ. Njikọ njikọ ahụ na-achọkarị ndị ọrụ Webmasters iji belata ihe ize ndụ nke imerụ nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ gị.
Ọrụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi bụ adighi ike. Mgbe ikpeazụ anyị jiri ha, anyị ga-ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okporo ụzọ na enweghị mmetụta na ndị ọbịa, ọchụchọ, ma ọ bụ uru ọ bụla ọzọ.
Y’oburu na odi nfe karie, obu n’ihi na obu. Ma obughi na odi nfe karie ya, imefu ego ole na ole taa nwere ike ibutere gi otutu puku dolla n’ime oge ejiri mee nyocha ma choputa ihe ndia.
Nkwupụta Ntọhapụ Mgbasa Ozi maka Nkesa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ n’ihu ndị na-ege ntị ziri ezi na saịtị dị mma, usoro kachasị mma maka gị bụ imepụta ndepụta nke saịtị lekwasịrị anya ebe ọdịnaya gị dị oke mkpa yana saịtị ndị ahụ nwere ikikere na ntanetị. Greatzọ dị mma iji lelee maka mkpa dị site na nyocha engine dị ugbu a site na iji ngwá ọrụ Semrush ma ọ bụ ewu ewu site na saịtị dị ka Buzzsumo.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọpụta saịtị 25 ruo 50 bụ ndị nwere ikikere ma bụrụ ndị ama ama na isiokwu ahụ, ugbu a ị nwere ike ịme obere igwu ala ma chọpụta otu esi esi kpọtụrụ onye nwe saịtị ahụ. Nyiwe dika Mkpebi enye ụlọ ọrụ nwere ụzọ ị ga-esi zube ma ziga ndị na-emetụta ozi sitere na saịtị ndị ahụ. Usoro ha na-enyekwa nhọrọ maka ịmegharị arịrịọ ugboro ugboro, na-akọ banyere mmetụta nke mgbasa ozi ọha na eze gị, na ọbụna nye ohere maka nzaghachi ma ọ bụ pụọ na onye nta akụkọ ezubere iche ma ọ bụ mmetụta.
Wepụta oge na -emepụta nnukwu ọkpụkpọ. Guo ihe ole na ole sitere na saiti influencer ka obi di gi uto udiri ederede ha na ozi ha gha acho. Mgbe ahụ mepụta ozi na ịgwa ha maka akụkọ gị, kedu akụkụ a ga-enye ya na saịtị ahụ, ma nye ihe ọ bụla ọzọ dị ka onyonyo ma ọ bụ vidiyo ka onye nwere ike nwee ike ikpokọta edemede.
Ya na onye ahịa a, anyị nwere ha n'otu ngosi telivishọn dị na mpaghara, anyị akpọtụrụla ha na mpaghara akụkọ akụkọ azụmahịa ọ bụla, anyị ekwuola ọtụtụ okwu gafee akwụkwọ ndị bụ isi na ụlọ ọrụ ahụ. Mmetụta zuru ezu dị ịtụnanya na saịtị ahụ na-aga n'ihu na-edozi nke ọma maka isiokwu dị mkpa.
Agbanyeghị, nyere nkesa a, anyị ga-enyocha saịtị ahụ maka backlinks na-adịghị mma ebe ọ bụ na anyị achọghị ka ogo ọchụchọ ha na-ata ahụhụ ma ọ bụrụ na Google kwenyere na ha si spam na-ekesa saịtị PR maka backlinks. Yabụ, ọ bụghị naanị na nkesa ahụ arụghị ọrụ, ọ na-ewetara anyị iru uju ọzọ ka anyị na-enyocha ogo saịtị ahụ yana ikike njikwa injinị njikwa.
Tags: backlinksbuzzsumonkenkeprpr nkesambipụta ndị nchụ nta akụkọpịa mgbasa nkesasemrush
Kedu ihe bụ Sistemụ Njikwa Nkwekọrịta? Ruo kè Ha A Popularaa Ka Ha Na-ewu ewu?